Global Voices teny Malagasy » Fampitondrana vohoka sa fampamombana ankaterena? Tsy mbola manana fahefana amin’ny vatatenany ny vehivavy peroviana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Jona 2021 5:04 GMT 1	 · Mpanoratra Duzka Ortiz Nandika (en) i Emma Dewick, Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Però, Fahasalamàna, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
Saripikan'ny vehivavy Peroviana sy ny zanany avy amin'i pxhere , tsy misy copyright. 
Nandritra ny ady mitam-piadiana anatiny tao Però, nifanandrinan'ny Fanjakana tamin'ireo vondrona mpampihorohoro  nanomboka ny taona 1980 ka hatramin'ny taona 2000, nampiditra andiam-politika  entina mampihena ny taham-pahaterahana tao amin'ny firenena ny governemantan'ny Filoha tamin'izany Alberto Fujimori (28 Jolay 1990 – 22 Novambra 2000).
Tafiditra amin'izany ny fampamombàna ankaterena  vehivavy tombanana ho 270.000 isa sy lehilahy 22.000 isa, ka ny ankamaroan'izy ireo dia avy amin'ny vondrona mponina indizeny sy mahantra. Amin'izao fotoana izao, manohy ny tolony hahazoany rariny  [fr] mba tsy hanadinoana an-dry zareo ireo niangana tamin'izany fampamombàna ankaterena izany. Na izany aza, nandeha mora dia mora ny fanaovana izany, noho ny “tsy fisian'ny fahavononana ara-politika loatra sy ny tsy fahakatakarana ny atao hoe zon'olombelona”, araka an'i María Esther Mogollón, mpitondratenin'ny  Fikambanan'ny vehivavy peroviana niharan'ny fampamombàna ankaterena.
Tokony ho roapolo taona taty aoriana, tamin'ny taona 2020 sy ny taona 2021, mety hieritreritra ianao hoe efa vita ny amin'ireo fepetram-pifehezana ny fiterahana ireny. Tsy izany anefa no mitranga. Ny fifehezana ny vatatenan'ny vehivavy ao Però amin'izao fotoana izao dia mifototra amin'ny herisetra ara-pananahana sy ny fanaovana ho heloka ny fanalan-jaza.
Tamin'ny taona 2020, nahitana 12 isanjato ny fisongan'ny  vohoka tsy nirina tao Però, ary adolantsento ny ankamaroan'izy ireo. Ny zavatra hafa azo lazaina ihany koa dia mihoatra ny 13.840 ny trangan- kerisetra ara-pananahana, ka ny 43 isanjato amin'izany dia adolantsento 12 ka hatramin'ny 17 taona ary ny 20,7 isanjaton'ny lasibatra dia zazavavy manomboka ny 6 ka hatramin'ny 11 taona.
Raha jerena amin'izay lafiny izay, mihoatra ny iray isaky ny folo  ny zazavavy efa nitondra vohoka teo amin'ny fiainany. Ambony kokoa ny tarehimarika any amin'ny faritra ambanivohitra ao amin'ny firenena, fa mihoatra ny iray isaky ny zazavavy dimy no efa nitondra vohoka mialoha ny fahafenoany taona (18). Tamin'ny taona 2020, nitombo avo telo heny  ny isan'ny zazavavy latsaky ny folo taona noterena ho lasa reny tao Però, izay fiantraikany mivantana amin'ny fitomboan'ny herisetra ara-pananahana tsikaritra nandritra ny fotoanan'ny valan'aretina.
Elga Prado Vasquez, mpandrindra ny programam-pampizakantena ara-batana sy ara-pananahana avy amin'ny Hetsika Manuela Ramos , no nilaza tamin'ny tamin'ny alalan'ny telefônina fa vao maika  tsy manam-piaro mihitsy noho ny teo aloha aza ireo vondrom-ponina marefo nandritra ny valan'aretina. Ary tao anatin'ny fepetram-pirindrinana tao amin'ny firenena, nakaton'ny Fitondram-panjakana peroviana ireo servisy nilaina ankapobeny, ary vao maika nihaloza ny tsy fahombiazan'ny rafi-pitsaboana. Zazavavy, tanoravavy ary vehivavy maro no navela hiady irery  rehetra tratran'ny herisetra ara-batana na ara-pananahana rehefa ao an-tranony. Na dia efa nitsahatra aza ny tsy maintsy ihibohana ao Però amin'izao fotoana izao ary efa nisokatra ny tobim-pahasalamam-bahoaka, mampanahy ny mieritreritra ny tarehimarika raha ho averina indray ny fanaovana fihibohana rahatrizay.
Manampy trotraka ny toe-draharaha ihany koa ny filazan'ny FTMF PROMSEX  feminista fa ny fanalan-jaza tsy azo antoka (tsy eny amin'ny tobim-pahasalamana) no antony fahatelo be indrindra mahatonga ny fahafatesan'ny reny ao Però. Efa nahitana fanalan-jaza avokoa ny avy amin'ny sarangam-piarahamonina sy ny haavom-pahaizana rehetra. Na izany aza, araka ny fanadihadiana  iray momba ny fanalan-jaza ataon'ny vehivavy efa lehibe, ny olona avy amin'ny saranga antonony sy ambany ara-toekarena, sy ireo nandia fanabeazana faharoa sy sekoly ambony no hita kokoa ho efa nanala zaza. Raha atotaly, efa ho ny iray ampahadimin'ny vehivavy lehibe no efa nanala zaza indray mandeha teo amin'ny fiainany. Araka ny Ministeran'ny Fahasalamana  ao Però, tanora zazavavy miisa 2480 no nampidirina hopitaly tamin'ny taona 2018 raha vao avy nanao fanalan-jaza.
Ao Però, saika ny fanalana zaza rehetra no tsy ara-dalàna hatramin'ny taona 1924 , ankoatra ny tranga fanahiana amin'ny aina na fahasalaman'ilay vehivavy. Tsy izany ihany, azon'ny lalàna saziana ireny fanalan-jaza ireny. Tanelanelan'ny taona 2000 ka hatramin'ny taona 2019, vehivavy sy tanora zazavavy miisa 571 no notsaraina  noho ny fampitsaharan-dry zareo ny fitondrany vohoka, raha 961 ny isan'ny trangam-pitoriana. Araka ny nolazain'ny Fikambanana Katolika miaro ny Zo Hisafidy, miisa 1000 isan'andro ny fanalan-jaza  ao Però.
Na dia eo aza ireo tarehimarika ireo, dia vitsy dia vitsy ny antoko politika  nahitana ny zo ara-pananahana tao amin'ny teti-panorony hanomanana ny fifidianana izany notanterahana tamin'ny 11 avrily 2021. Roa monja amin'ireo antoko 18  no nampiditra tolotra ahafahana mifehy ny fiterahana sy fonosana hamehana , izay amboaram-pitsaboana natao hiarovana ny fahasalamana sy izay mahasoa ara-pananahana ireo lasibatry ny herisetra ara-nofo.
Tsy hita taratra hisy fiovana ity toe-draharaha ity amin'ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena izay hotontosaina amin'ny alahady 6 jona ho avy izao. Ny tena mampanahy dia heverina ho samy mpandala aina  kokoa sady samy tsy manana tetipanorona mazava  momba ny zo ara-pananahana ny kandidà roa tafiditra amin'izany fihodinana faharoa izany, dia ry Pedro Castillo sy ry Keiko Fujimori.
Avy amin'ny fanamombana ankaterena mankany amin'ny fampitondrana vohoka ankaterena, dia hita taratra fa tsy afa-mifehy ny vatatenany sy ny maha-lonaka azy ny vehivavy Peroviana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/06/01/152590/
 vondrona mpampihorohoro: https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_conflict_in_Peru
 fampamombàna ankaterena: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56243650
 12 isanjato ny fisongan'ny: https://gestion.pe/peru/peru-triplico-en-el-2020-las-ninas-menores-de-diez-anos-forzadas-a-ser-madres-noticia/?ref=gesr
 mihoatra ny iray isaky ny folo: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Endes2019/
 avo telo heny: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/peru-triplico-en-2020-las-ninas-menores-de-diez-anos-forzadas-a-ser-madres/20000013-4484673?fbclid=IwAR1Ga3Fzfj1XEztgU6-tqUFr5LmZf_Va_7YYjkHrkf5ccYHmMcvU93s3b6I
 Hetsika Manuela Ramos: http://www.manuela.org.pe/
 vao maika: https://promsex.org/embarazo-adolescente-tambien-es-una-emergencia/#:~:text=Hasta%20julio%20del%202020%20se,L%C3%ADnea%20(CNV)%20del%20MINSA
 hiady irery: https://www.planinternational.org.pe/blog/conoce-las-cifras-de-violencia-contra-las-mujeres-durante-la-pandemia#:~:text=Esta%20situaci%C3%B3n%20ha%20desencadenado%20un,de%20miembros%20de%20su%20familia.
 Ministeran'ny Fahasalamana: https://ojo-publico.com/1411/abortar-en-peru-victima-y-familiares-son-llevados-carcel
 hatramin'ny taona 1924: https://amp.pe/desde-1924-se-realizan-abortos-terapeuticos-en-el-peru-icual-es-el-cambio-ahora/
 1000 isan'andro ny fanalan-jaza: https://www.cddperu.org/es/informacion/hoja-informativa/situaci%C3%B3n-del-aborto-clandestino-en-el-per%C3%BA
 vitsy dia vitsy ny antoko politika: https://rpp.pe/politica/elecciones/elecciones-2021-que-plantean-los-partidos-politicos-sobre-el-aborto-el-matrimonio-igualitario-y-la-eutanasia-noticia-1319659
 Roa monja amin'ireo antoko 18: https://redaccion.lamula.pe/2021/03/28/elecciones-2021-solo-dos-partidos-incluyen-propuestas-sobre-anticonceptivos-y-kits-de-emergencia/redaccionmulera/
 fonosana hamehana: https://rpp.pe/peru/actualidad/kit-de-emergencia-que-es-y-por-que-es-clave-que-todas-las-victimas-de-violencia-sexual-lo-reciban-noticia-1306029
 mpandala aina: https://eltiempo.pe/rafael-lopez-aliaga-pedro-castillo-segunda-vuelta-mp/
 tsy manana tetipanorona mazava: https://www.expreso.com.pe/opinion/pedro-keiko-y-el-aborto/